merolagani - सानिमा लाइफको आईपीओ आवेदन गर्नु अघि कम्पनी कस्तो छ? हेरौं
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वसाधरणको लागि आज, बुधबार (साउन २० गते) देखि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशनमा ल्याएको छ। कम्पनीले कुल जारी पूँजी २ अर्ब रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता शेयर निष्काशनमा ल्याएको हो।
त्यसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख कित्ता कर्मचारीहरुलाई र अर्को ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख कित्ता नै सामूहिक लागनी कोषहरुलाई सुरक्षित गरी बाँकी ५४ लाख कित्ता शेयरमा सर्वसाधारणको लागि छुट्टाएको छ।
इच्छुक आवेदकले सि–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरोशेयरको वेब तथा एप मार्फत पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।
कति कित्ताको लागि आवेदन दिने?
कम्पनीको आईपीओमा प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले न्यूनतम १० कित्तादेखि त्यसभन्दा माथि १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम ३० हजार कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरोशेयरको वेब तथा एप मार्फत पनि आईपीओमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।
पछिल्लो समय आइपीओमा आवेदन दिनेको संख्या २१ लाखभन्दा बढी पुगिसकेकाे छ। त्यस अनुसार कम्पनीको आईपीओमा पनि माग भन्दा बढी आवेदन पर्ने निश्चित छ। मागभन्दा बढी आवेदन परे धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार हरेक आवेदकलाई १० कित्ताका दरले शेयर बाँडफाँड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसअनुसार गोलाप्रथाबाट ५ लाख ४० हजार जनाले मात्रै न्यूनतम १० कित्ता शेयर पाउनेछन्।
यसकारण कम्पनीको शेयरमा पनि १० कित्ताको लागि मात्रै आवेदन गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।
दुई वर्षमा सञ्चित आय ६४ करोड पुर्याउने प्रक्षेपण
इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सञ्चित आय ६४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। इन्स्याेरेन्स आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको थियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पनि कम्पनीले १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने कम्पनीले १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सञ्चित आय गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार सञ्चित आय १० करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरण पत्रमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कम्पनीले सञ्चित आय १७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा प्रतिशेयर नेटवर्थ १३९ रुपैयाँ ३३ पैसा र प्रतिशेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ ११ पैसा पुग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अपरिष्कृत वित्तीय विरण अनुसार इन्स्योरेन्सको प्रतिशेयर नेटवर्थ १०९ रुपैयाँ ६७ पैसा र प्रतिशेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिशेयर नेटवर्थ ११६ रुपैयाँ ७४ पैसा र प्रतिशेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ ७३ पैसा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
औसत जनाउने रेटिङ्ग
इक्रा नेपालले प्रदान गरेको ग्रेडिङ्गको अवधि एक वर्षको लागि हुनेछ। त्यस अनुसार क्रेडिट रेटिङ्गको अवधी २०७८ चैत ८ गतेसम्म कायम हुनेछ।
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत स्थापना भई बीमा ऐन २०४९, बीमा नियमावली २०४९ बमाेजिम जीवन बीमा व्यवसायको कारोबार गर्ने कम्पनी हो।
कम्पनी ऐन बमोजिम २०६४ मंसिर १३ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भइ बीमा समितिबाट २०७४ कार्तिक ५ गते जीवन बीमा व्यवसाय व्यवसाय गर्ने उदेश्यले अनुमति प्राप्त कम्पनी हो। कम्पनीले २०७४ मंसिर २२ गते देखि बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडाैँ महानगरपालिका, वडा नं. १, कमलादी काठमाडौँमा रहेको छ।
हाल कम्पनीले सात वटा प्रदेश कार्यालयहरु सहित ११८ वटा शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
कम्पनीको अधिकृत पूँजी ३ अर्ब, जारी पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ। सर्वसाधारणलाई ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता प्राथमिक शेयर निष्काशन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ।
आईपीओ निष्काशनपछि कम्पनीमा ७० प्रतिशत संस्थापक र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर स्वामित्व कायम हुनेछ।
आईपीओ निष्काशन गर्नुको उद्देश्य
कम्पनीको जारी पूँजी २ अर्ब रुपैयाँमध्ये प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था भए अनुरुप जारी पूँजीको ३० प्रतिशतले शेयर सर्वसाधरणमा निष्काशन गर्नु परेकोले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्नु परेको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका उद्देश्यहरु अनुरुप गर्नुपर्ने कार्यहरुको लागि आवश्यक पूँजी संकलन गर्न, सेवा विकास गरी बीमा व्यवसायको जोखिम धारण बढाउनको लागि आवश्यक पर्ने पूँजी व्यवस्था गर्न सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गर्नु परेको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गरी संकलन हुने पूँजी कम्पनी ऐन, बीमा ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिमको अधिनमा रही कम्पनीको व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरिने जनाएको छ।
आईपीओ निष्काशनपछि संकलन भएको रकममध्ये कम्पनीले नेपाल सरकारको ऋणपत्र/विकास ऋणपत्रमा १५ करोड रुपैयाँ, वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा २४ करोड रुपैयाँ, विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ९ करोड रुपैयाँ, वित्त कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा ६ करोड रुपैयाँ र पब्लिक कम्पनीको शेयरमा ६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
सञ्चालक समितिमा को को छन्?
इन्स्योरेन्सको कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ७ जना रहने व्यवस्था रहेको छ। समितिमा संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट चार जना, सर्वसाधारण शेयरधनीबाट २ जना र स्वतन्त्र व्यवसायिक विशेषज्ञ १ जना सञ्चालक हुने प्रावधान छ।
सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा कुमार प्रसाद कोइराला रहेका छन्। यस्तै, सञ्चालक समिति सदस्यमा घनश्याम थापा, डा. सुबर्णदास श्रेष्ठ, बद्री विशाल घिमिरे र भरत बहादुर थापा रहेका छन्। थापा भने स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा नियुक्त भएका हुन्।
हाल इन्स्याेरेन्सको सञ्चालक समितिमा ५ जना रहेका छन् भने सर्वसाधारण शेयरधनीहरुबाट २ जना चयन हुन बाँकि छ।
नेपालमा बीमा व्यवसायको विकास गर्न बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिबृद्धि गरी हरेक क्षेत्रमा बीमा प्रति आकर्षित गर्दै सर्वसाधारण, उद्योगी, व्यापारी एवं विभिन्न संघ संस्थाहरुसम्ममा बीमा प्रणाली मार्फत सरल, सुलभ र छिटो छरिटो तरिकाबाट भरपर्दो एवं गुणस्तरीय बीमा सेवा प्रदान गर्ने तथा निकट भविष्यमा ग्रामीण क्षेत्र सम्म सेवा विस्तार गर्ने, सेवामा विविधिकरण गर्दै जाने तथा थप सेवा विस्तार गर्दै जाने कम्पनीको योजना रहेको छ।
जीवन बीमा सेवालाई समाजका हरेक क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न उपयुक्त बीमा योजनाहरु तर्जुमा गरी गुणस्तरीय बीमा सेवाप्रदान गर्ने कार्यमा प्रयासरत रहने, लगानी विविधिकरण गरी औसत आय वृद्धि गर्ने तथा बीमितहरुको प्रतिफल वृद्धि प्रयासरत रहने, लघु बीमा योजनाको माध्यमबाट बीमा सेवा पुर्याउने कम्पनीको योजना छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजार समेतलाई दृष्टिगत गरी नयाँ बीमा योजनाहरु तर्जुमा गर्ने, कम्पनीको सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारलाई थप तिव्रता दिई कार्य क्षमता र सुरक्षामा वृद्धि गर्ने, बीमितको सेवा प्रणालीमा गुणात्मक वृद्धि गर्न दावी भुक्तानी प्रकृयामा सरलीकरण एवं नविकरण बीमा शुल्क भुक्तानीमा सहजता अपनाउने, कर्मचारी तथा अभिकर्ताहरुको पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने कम्पनीको भावि रणनीति छ।
सेवाग्राहीहरुको संख्यामा वृद्धि गर्दै लैजाने, समय सापेक्ष रुपमा कार्यक्षेत्र विस्तार गरी कम्पनीको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजाने, तथा भविष्यमा आवश्यकता अनुसार जारी तथा चुक्ता पूँजी थप गदै लाने कम्पनीको योजना छ।
यसैगरी, कम्पनीले जीवन बीमा क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी बीमा व्यवसायबाट बीमित तथा लगानीकर्ता शेयरधनीहरुलाई यथोचित प्रतिफल दिन प्रयास गर्ने जनाएको छ।